Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi China » Red njem na-agbawa na China na 2021
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa ozi China • omenala • News • Ịrụ ọrụ • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Red njem bịara bụrụ nhọrọ ndị njem China na-ewu ewu na ọkara mbụ nke afọ a.
Ga na saịtị ndị mere eme nke nwere ihe mgbanwe nke oge a na-ewu ewu na China.
Ndị amụrụ na 1980s na 1990s nwere mmasị na njem nlegharị uhie.
Tiketi ntinye akwụkwọ maka saịtị na-ebu ihe nnweta mgbanwe bilitere 208 pasent na 2021.
Dabere na akụkọ ụlọ ọrụ ewepụtara na nso nso a, njem nlegharị uhie - ịgagharị na saịtị ndị mere eme na ihe nketa ndị ọchịchị Kọmunist, ghọrọ nhọrọ ndị njem China na-ewu ewu na ọkara mbụ nke 2021.
Nkwupụta ahụ, nke otu ụlọ ọrụ na-ahụ maka njem na ntanetị na China wepụtara, kwuru na ọnụọgụ ndị na-etinye tiketi na ikpo okwu maka saịtị na-ebu ChinaIhe nketa mgbanwe bilitere 208 pasent afọ na afọ n'oge oge ahụ.
Ọnụ ọgụgụ ahụ na-anọchite anya mmụba pasent 35 site n'otu oge ahụ na 2019, ka akụkọ ahụ kwuru.
Ndị amụrụ na 1980s na 1990s nwere mmasị na njem nlegharị uhie, na-akpata pasent 38 na 31, n'otu n'otu, nke ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ na-eleta ebe ndị ahụ.
Nkwupụta ahụ kwuru na Ogige Tian'anmen, Ebe Ndebe Ihe Ndị Agha nke Ndị China nke mgbanwe ndị mmadụ na ugwu Jinggang bụ ebe kachasị ewu ewu maka njem nleta uhie.